नेपालमा आज एकैदिन थप ५३ जनामा कोरोना पुष्टि, कहाँ कति ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
नेपालमा आज एकैदिन थप ५३ जनामा कोरोना पुष्टि, कहाँ कति ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडौं । बाँकेमा थप ४७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँकेसँगै मोरङ, गुल्मी, रौतहट, दाङमा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या ३५७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप ५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटा अनुसार भेरी अस्पतालको प्रयोगशालमा बाँकेका ४६ जना पुरुष र १ जना महिला, विराटनगरको प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका एकजना पुरुष, भैरहवाको प्रयोगशालमा गुल्मीका ४१ वर्षीया पुरुष, धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका एकजना, रौतहटका एकजना, दाङका एकजना र धादिङका एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
डा देवकोटाका अनुसार ४ सय २६ जना संक्रमित तथा आशंका गरिएका व्यक्तिहरु देशभरका विभिन्न आइसोलेसनमा राखिएको छ । डा देवकोटाका अनुसार गत २४ घण्टामा २ हजार ५ सय ५८ वटा नमूना पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म ३० हजार ७२३ वटा नमूना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ ।
यस्तै आरडीटी विधिबाट हालसम्म ६९ हजार ५ सय ६० जनाको परीक्षण भएको छ भने गत २४ घण्टामा १ हजार ७ सय ९१ वटा नमूना परीक्षण भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २ जनाको ज्यान गएको छ ।
यसैबीच लाखौं नेपालीहरु कार्यरत खाडीका ६ मुलुकमा कोरोना भाइरसले ६९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ३७ हजार ७०६ जना संक्रमित भएका छन् । खाडीका ६ राष्ट्रमध्ये साउदी अरवमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ३१२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ ५४ हजार ७५२ जना संक्रमित भएका छन् ।
यस्तै यूएईमा २२० जनाको मृत्यु भएको छ भने २३ हजार ३५८ जना संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुवेतमा ११२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ हजार ८५० जना संक्रमित भएका छन् । यस्तै ओमानमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार १८६ जना संक्रमित भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले कतारमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ हजार ६०४ जना संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणले बहराइनमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ ६ हजार ९५६ जना संक्रमित भएका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरु रहेका खाडी मुलुकमा संक्रमण बढ्दै जादा उनीहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।